Formwork Sisitimu, Formwork Beam, Modular Scaffolding Sisitimu - Sampmax
Sampmax (Xiamen) Kuvaka Technology Co, Ltd.
Modular rwemichinjiko System
Kugara uchifunga nezve maitiro ekugadzirisa matambudziko emutengi.
Kwedu kwese kwatinotangira kuita kuita chinhu ichi kuzvipira kwakazara kuchengetedzeka, unova musimboti wezvese kuvaka.
Zvese Sampmax Zvigadzirwa zvekuvaka zvinotenderwa uye zvinosimbiswa kuona kuti vatengi vanovimbiswa zvachose nezvehunhu.
Kuenderera mberi kwehunyanzvi uye R&D yezvinhu zvitsva zvinopa vatengi mhinduro dzakapfuma uye dzinoshanda.
Pasi pemamiriro ekuona mhando uye kusangana nezvinodiwa nevatengi, chatinofanirwa kuita kupa vatengi mhinduro dzakanakisa uye dzehupfumi.
Sampmax Kuvaka kwakatanga zvekuvakisa zvitengeswa kubva 2004. Kubva pakutanga, isu takasimbisa kuitira kuchengetedza kwemhando yepamusoro zvekuvakisa senge Firimu Yakatarisana Plywood, Furniture Plywood, Scaffolding Simbi Prop, Chimiro Scaffolding.
Iyo indasitiri yekuvaka yakaoma kwazvo. Iine hunyanzvi hwekuenderera, yakasimba yemhando yekudzora sisitimu uye inoramba ichironga zvinhu, Sampmax inopa vatengi yakazara yakazara formwork uye scaffolding mhinduro kuita kuti yako projekiti inyatsoita uye inobatsira.
Zvese zvigadzirwa zvedu zviri 100% kuongororwa uye vanokwanisa. Mirairo yakakosha inopihwa ne1% yezvipenga zvikamu Mushure mekutengesa, isu tinoteedzera mashandisiro emutengi uye tinowanzo dzokera kumhinduro kuti tivandudze maitiro echigadzirwa.
Iyo fomati uye scaffolding system yatinopa inoita kuti indasitiri yekuvaka inyatsoita basa, kuchengeteka uye nekukurumidza. Ndichiri kuvandudza kugadzira tekinoroji yezvikamu zvigadzirwa senge plywood, post shore uye aluminium basa bhodhi, isu tinoteererawo kumagumo mashandiro panzvimbo yebasa, izvo zvinotitungamira kuti titarise kune yekuvaka basa nzvimbo yekuendesa nguva pamwe nekuti nyore sei vashandi vanoshandisa yedu zvigadzirwa.
Kwakakurudzira Q235 Steel Scaffolding manera kuti ...
Rwemichinjiko Swivel Castor Wheel kune Scaffolding
Scaffolding Swivel Coupler yekuvaka
Scaffolding Kuzvivhara Koga Gedhi rekuchengetedza kweManera ...
Wona zvese catalog
Kukwira formworkScaffolding MhinduroMafomu Ekugadzirisa
Chimiro chekukwira chakaringana nemutumbi mukuru wechivakwa uri pamusoro pemamita makumi mana nemashanu, uye unokwanisa kuiswa kumutumbi mukuru wezvivakwa zvakasiyana. Inotora iyo-yesimbi simbi seyakazara, iine midziyo yakasanganiswa, kuvaka kwakadzika uye kushandiswa kwakanyanya, kuchengetedzwa kwakazara mukati, midziyo yehunyanzvi yekuchengetedza, hapana njodzi dzemoto, nezvimwe.
Scaffolding zvinoreva zvitsigiso zvakasiyana zvakavakirwa panzvimbo yekuvakira kuti vashandi vashande uye vagadzirise kutenderera kwakamira uye kwakatwasuka. Zvikurukuru zvevashandi vekuvaka kuti vashande kumusoro uye pasi kana kuchengetedza yekunze chengetedzo mambure uye nekuisa zvikamu panzvimbo yakakwirira. Kune akawanda marudzi e scaffolding ...
Iyo yemazuva ano kongiri inodira chivakwa formwork system ndeyechinguvana modhi dhizaini yekuona kuti kongiri yadururwa mukongiri mamiriro maererano nezvinodiwa mukugadzirwa dhizaini. Inofanira kutakura yakatwasuka mutoro uye wepamusoro mutoro panguva yekuvaka ...